11/07/2018 - Page 2 sur 4 -
Mananara Avaratra : Olona maro nararin’ny fihinanana trozona
Nahitana fatina trozona tany amin’ny toeram-pitsangatsanganana iray antsoina hoe Ambitsika. Ny marainan’ny alatsinainy lasa teo no nahitana izany, teny amin’ny sisin-dranomasina tany Mananara Avaratra, faritra Analanjirofo. Raha ny loharanom-baovao dia fantatra fa ny andron’io ihany …Tohiny
Fandoavan-ketra : Namoraina amin’ny alalan’ny « Hetraonline »
Nampahafantarin’ny teo anivon’ny sampandraharahan’ny hetra (DGI) omaly, fa mitohy hatrany ny fanatsarana, izay efa natombok’izy ireo nandritra ny taona maromaro. Araka izany, tafapetraka ary efa miasa sy azo ampiasaina nanomboka omaly ny fanambaran-ketra sy fandoavan-ketra …Tohiny
Fanarahan-dia tany Bongolava : Fokonolona 2 no maty, 1 naratra
Nitrangana fanafihan-dahalo mitam-piadiana indray tany amin’ny fokontany Ampahibe kaomina Tsiroanomandidy distrikan’i Bongolava. Ny sabotsy lasa teo no nitrangan’izany tany an-toerana, izay tokony ho tamin’ny 5 ora hariva tany ho any. Noravan’ireo dahalo nirongo fitaovam-piadiana mahery …Tohiny
Lozam-pifamoivoizana tany amin’ny RN7 : Zaza 10 taona maty tsy tra-drano
Nitrangana lozam-piarakodia indray tany amin’ny lalam-pirenena faha-7, tany amin’ny fokontany Ambohimandroso kaomina Antanifotsy distrikan’i Vakinankaratra. Zazalahikely 10 taona no fantatra fa namoy ny ainy vokatry ny faverezan-drà. Ny sabotsy lasa teo no nitrangan’izany, tany amin’ny …Tohiny
Vao telo taona monja dia efa hita ny fiovana eto amintsika, raha tsy hilaza fotsiny afa-tsy ny ny toe-karem-pirenena, izay efa mitraka tokoa amin’izao fotoana izao. Anisan’ny fanamby efa napetraky ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny ...Tohiny